एप्पलले आईक्लाउडको लागि पूर्वाधार सुधार गर्नेछ आईफोन समाचार
एप्पलको आफ्नो आईक्लाउड भण्डारण पूर्वाधार धेरै सुधार गर्ने योजना छ
एप्पल आईक्लाउडको लागि पूर्वाधार सुधारको लागि काम गर्दैछ समाचारलाई ध्यानमा राख्दै जुन केहि घण्टामा प्रस्तुत हुनेछ। टिम कुकको दिमागमा आफ्नै भण्डारण उपकरणहरू विकास गर्न, र थर्ड कम्पनीहरूको कम पूर्वाधार प्रयोग गर्नुहोस्। उनको योजनाहरु मध्ये एक हो तपाईंको क्यालिफोर्निया, नेभाडा, उत्तरी क्यारोलिना र ओरेगन डाटा केन्द्रहरू बीच आफ्नो फाइबर अप्टिक नेटवर्क निर्माण गर्नुहोस्.
अहिले, एप्पलले प्रायः HP, Cisco, र NetApp बाट सर्भरहरू प्रयोग गर्दछ। एप्पलको विचार हो अन्य कम्पनीहरूमा यति धेरै निर्भर गर्दैन र भण्डारण सर्भरहरूको अधिक नियन्त्रण छ। मलाई लाग्छ कि यो भविष्यमा धेरै सकारात्मक हुनेछ, किनकि आईकक्लाउड सेवामा केही ड्रप देख्नु सामान्य छ जुन हामीलाई थप टाउको दुखाइ दिन सक्छ। जे भए पनि, परिवर्तन क्रमिक हुनेछ। प्रारम्भमा उनीहरूले तेस्रो पार्टी सर्भरहरू प्रयोग गर्न जारी राख्नेछन्, तर उनीहरूले उनीहरूको आफ्नो अधिक र अधिक प्रयोग गर्न सक्दछ, सायद, उनीहरूले तेस्रो-पक्ष सेवाहरू प्रयोग गर्न रोक्छन्।
यस वर्षको सुरूमा एप्पलले एरिजोना, आयरल्याण्ड र डेनमार्कका नयाँ डाटा केन्द्रहरूमा $ 3.900।। बिलियन खर्च गर्ने बताइसकेका छन। तिनीहरू उत्पादनमा पनि काम गर्दैछन्, जसलाई एक शीर्ष-र्याक स्विच भनिन्छ, स्टार्टअप कमुलस नेटवर्क इंकको ओपन सोर्स सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर क्वान्टा कम्प्युटर इंक द्वारा सर्वरमा चल्दै आएको।
टिम कुकले पनि आफ्नो ब्यान्डविथको गति बढाउन आफ्नै उच्च-स्पीड फाइबर लाइनहरू निर्माण गर्न चाहान्छन्, यस्तो कम्पनी जुन गुगल, अमेजन, माइक्रोसफ्ट र फेसबुक जस्ता अन्य कम्पनीहरूले पहिले नै प्रयोग गरिसकेका छन् (कति अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने एप्पल अन्तिममा जानको लागि अन्तिम हो। यस रेलमा), केफर्टिनोको टेलिभिजन योजनाहरूको लागि धेरै फाइदाजनक हुने कुरा।
मलाई लाग्छ यी परिवर्तनहरू जुन एप्पलले गर्न चाहन्छ सबै सकारात्मक छन्। सिद्धान्तमा, हामी अन्त प्रयोगकर्ताहरू मात्र जित्न सक्छौं, किनकि एप्पलले हामीलाई उत्तम सेवा प्रदान गर्दछ। र किन आईक्लाउडमा थप ठाउँको सपना देख्दैन? यो सजिलो हुँदैन, तर यो सम्भव छ। हेरौं कि यदि तिनीहरूले हामीलाई सकारात्मक रूपमा चकित गरे।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » iCloud » एप्पलको आफ्नो आईक्लाउड भण्डारण पूर्वाधार धेरै सुधार गर्ने योजना छ
ओएसएक्स एल क्यापिटान, म्याकको लागि नयाँ अपरेटिंग प्रणाली
IVN का साथ ट्रिभिया क्र्याक (कुनै विज्ञापनहरू) नि: शुल्क डाउनलोड गर्ने तरीका